Abantu phezu Okuthunyelwe, Abantu Bangaphezu Kwesibambo | Martech Zone
ULwesibili, May 7, 2013 Douglas Karr
IHubSpot yethule Ibhokisi lokungenayo lezenhlalo, uhlelo olusha oluhlanganisa ukuqapha imithombo yezokuxhumana nokushicilela nge-database yokuxhumana yeHubSpot, enika amandla abathengisi ukuthi bakhe imibono ehlukanisiwe yomsebenzi wezenhlalo wabaholi babo, amakhasimende, nabavangeli abakhulu. Ukuhlanganiswa okusha kunciphisa umsindo ohlotshaniswa nokulalela imithombo yezokuxhumana, kuxwayisa izinkampani kubantu ababalulekile abadinga izimpendulo, futhi kunikeze umongo wokuxhumana nabezindaba zenhlalo, kuthathe indawo yamasu aphezulu nokuphazamisa ukumaketha abantu abathandayo.
Izinzuzo ezisemqoka zesicelo esisha zifaka:
Ukuhlanganiswa ne-Database Yoxhumana Nabo yeHubSpotI-HubSpot izohambisana ngokuzenzakalela ne-akhawunti ye-Twitter ethembayo, eholayo, noma yekhasimende esekwe ku-imeyili futhi idonse irekhodi eligcwele lokuxhumana kwabo nenkampani yakho kuze kube manje, ukuze ukwazi ukwenza izimpendulo zakho zibe ngezakho ngemininingwane eyengeziwe nokuqukethwe. Ibhokisi Lemilayezo Engenayo nalo lizomaka noma iyiphi i-tweet evela kumuntu onegama elifanayo noxhumana naye ovela ku-database yakho, ukuze uqhubeke nokwakha amaphrofayili wokuxhumana.
Ingxenye Monitoring kanye Nezexwayiso: Inselelo esinesikhathi eside yabakhangisi ingumthamo omkhulu wemininingwane okufanele bahlunge ngayo nsuku zonke. Ibhokisi Lemilayezo Engenayo lenza izinkampani zikwazi ukukhuphula ngokushesha futhi kalula kalula amasheya ezokuxhumana nabantu abalulekile, ukukhomba kalula isigaba sempilo yomuntu onikiwe ngaphakathi kwethuluzi le-Inbox Yomphakathi, nokusetha izexwayiso ngokuya ngokuhamba phambili komkhiqizo wakho, kusuka esigabeni kanye nokuqapha kokuncintisana kuya ethungatha izinkomba zokuthenga zokhiye.
Ukusebenza kahle nokusebenza ngempumelelo ngaphandle kokumakethaUkwakheka nokusebenziseka kwe-Inbox Yomphakathi kwenza kube lula futhi kungabi namthungo kubaphathi bezentengiso nezinsizakalo ukusebenzisa isici sohlelo lokusebenza. Ngokuqondile, izaziso zohlelo lokusebenza lweselula zivumela abaphathi bezentengiso ukuthi bathole izaziso zohlelo lokusebenza ngokususelwa ekuqondisweni kwabo okuqondile. Ukuhlanganiswa kwe-Inbox Yomphakathi nethuluzi le-imeyili le-HubSpot kuvumela nabasebenzi bezinsizakalo ukuthi baphendule ngqo emibuzweni yamakhasimende ku-Twitter nge-imeyili eyenziwe yaba ngeyakho.
Izibalo ezisebenzayoAbakhangisi basalwela ukubala inani lemali elitshaliwe kwimidiya yezokuxhumana, kepha Ibhokisi Lemilayezo Engenayo leHubSpot livumela abathengisi ukuthi babone ukuthi zingaki izivakashi, imikhondo kanye namakhasimende akhiqizwa isiteshi ngasinye semidiya yezokuxhumana. Ngaphezu kwalokho, abasebenzisi ababoni nje kuphela inani eliphelele lokuchofoza noma ukuxhumana nesabelo ngasinye, kepha namagama oxhumana naye ngamunye oveze intshisekelo kuleyo tweet.
Ibhokisi Lemilayezo Engenayo lenza ezokuxhumana zibe ngumdlalo weqembu. Amaqembu okusekela angalandelela izicelo zesevisi nge-imeyili; Abakhangisi bangashintsha ukubizelwa esenzweni ekhasini ngalinye ithemba noma ukuvakashelwa okuholayo ngokuya ngokuthi ukuphi kumjikelezo wempilo yamakhasimende abo; futhi amaqembu okuthengisa angabeka imithombo yezokuxhumana iholele emkhankasweni ofanele wokuhola wokukhulisa. Ngaphezu kokuba ngumuntu uqobo, Ibhokisi Lemilayezo Engenayo linikezela ngamathuluzi amaningi ngezinzuzo ezinweba ngaphezu kokumaketha ukufaka ukuthengisa nezinsizakalo.
Ukukhuthaza ukwethulwa, I-Hubspot wabelane ngale infographic ekumaketheni kwezokuxhumana.
Tags: indawoimithombo yezokuxhumana hubspotinbox yezokuxhumanaSocial Media Marketingindlela yezokuxhumana
May 9, 2013 ku-4: 50 AM
Ithuluzi elihle kakhulu elivela eHubspot, kufanele uzame lokhu bese uzibonela ngokwakho! Okuthunyelwe okuhle!